ဘယ်လိုစကားလုံးစာရွက်စာတမ်း JPG သို့ကူးပြောင်းရန် - စကားလုံး - 2019
စာသားမက MS Word document တစ်ခု JPEG, image ကိုပြောင်း
Microsoft Word ကို created စာသားစာရွက်စာတမ်း, ဂရပ်ဖစ် JPG ဖိုင်ထဲမှာလွယ်ကူသည် Translate ။ ဒါကအနည်းငယ်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့အတူပြုမိပေမယ့်ပထမဦးဆုံးအဖွင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုလိုအပ်သောဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းသို့စာသားတွေနဲ့ပုံတစ်ပုံကိုထည့်သွင်းချင်များသို့မဟုတ်ထို site က add ချင်ပေမယ့်စာသားအဲဒီမှာကူးယူနိုင်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာမလိုချင်ကြဘူး။ ဒါ့အပြင်စာသားနှင့်အတူချောပုံရိပ်, သင်ဝေါလ်ပေပါ (မှတ်စုများ, သတိပေးချက်များ) အဖြစ် Desktop ပေါ်မှာ install နိုငျသညျ, သငျသညျအစဉ်မပြတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့အပေါ်မှာနှိပ်သတင်းအချက်အလက်များပြန်ဖတ်ပါလိမ့်မယ်။
စံ tools များ "ကတ်ကြေး" အသုံးပြုခြင်း
Microsoft ကသူ့ရဲ့ operating system ကိုသို့ပေါင်းစည်း, Window Vista နှင့် Windows7ဗားရှင်းနဲ့စတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အတော်လေးအသုံးဝင် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် - "ကတ်ကြေး" ။
ဒီ app အားဖြင့်သင်တို့ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် Third-party software ကိုစ clipboard ထံကနေပုံတစ်ပုံကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အဲဒါကိုယခင်ဗားရှင်းများတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ဖို့မလိုဘဲ screenshots များဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် "ကတ်ကြေး" ၏အကူအညီဖြင့်, သင်သာတစ်ခုလုံးကို Screen, ဒါပေမယ့်လည်းသီးခြားဧရိယာကိုဖမ်းယူလို့မရပါဘူး။
1. သင်က JPG-file ကိုလုပ်လိုသည့်အနေဖြင့်စာရွက်စာတမ်း Word, ဖွင့်ပါ။
က "Start ကို" မီနူးထဲမှာ 3. - - "Programs ကို" "ကတ်ကြေး", "စံ" ကိုရှာဖှေ။
မှတ်ချက်: သငျသညျ Windows 10 ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက, သင် tool ကိုရှာတွေ့ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ navigation bar ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးသောရှာဖွေရေးအိုင်ကွန်မှတဆင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာရှာဖွေရေး box ထဲမှာကီးဘုတ်ပေါ်လျှောက်လွှာ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
4. က "ကတ်ကြေး" မီနူးခလုတ်ကို "Start ကို" Run "Window" option ကို select လုပ်ကာ Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းပေါ်တွင် cursor ကိုရွေးပါ။ သာစာသားဧရိယာကို select မဟုတ်, အားလုံးအစီအစဉ်ကို window ၏, သည် "ဖျော်ဖြေမှု" ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ပုံထဲကဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်သောဧရိယာကိုသတ်မှတ်ရန်။
5. သင့်ရဲ့ဧရိယာက "ကတ်ကြေး" အစီအစဉ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်ရွေးချယ်ခွဲထား။ "File" ကိုနှိပ်ပါ, "အဖြစ် Save" နှင့်ထို့နောက်သင့်လျော်သောပုံစံကိုရွေးပါရွေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌ JPG ဖြစ်ပါတယ်။
6. , ဖိုင်ကို save ဖို့တည်နေရာ Specify ကနာမည်တစ်ခုပေး။
Windows XP နဲ့ Windows ကိုအစောပိုင်းဗားရှင်းအပေါ်တစ်ဦးစခရင်ပုံ Creating
ဤနည်းလမ်းကိုအဓိကအားထားတဲ့အပေါ်အဘယ်သူမျှမ utility ကိုလည်ပတ်မှုစနစ်၏ဗားရှင်းအဟောင်းနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုသင့်လျော်သည် "ကတ်ကြေး။ " သို့သျောလညျးသငျသညျချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုအရာရာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကီးဘုတ်ပေါ် 2. စာနယ်ဇင်း« PrintScreen »။
3. ပွင့်လင်း "ကိုသုတ်ဆေး" ( "Start ကို" - "Programs ကို" - "စံ" သို့မဟုတ် "ရှာရန်" နဲ့ Windows 10 အတွက်အစီအစဉ်၏အမည်ကိုထည့်သွင်း) ။
4. ကာ text editor နှင့်အတူအဆိုပါဖမ်းဆီးရမိပုံရိပ်ကိုကျွန်တော် Paint ထဲမှာထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာ မှစ. , clipboard ထံယခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရိုးရှင်းစွာ« CTRL + V ကို»ကိုနှိပ်ပါ။
5. လိုအပ်မယ်ဆိုရင် image ကိုတည်းဖြတ်ကြောင့်ဆိုဒ်ပြောင်းရန်, ထိုမလိုချင်တဲ့ဒေသများဖြတ်။
6. နှိပ်ပါ "File" နှင့်ကို select "Save As ကို။ " « JPG » format ကိုရွေးချယ်ပါ, ဖိုင်အမည်ကိုကယ်တင်နှင့်ရိုက်ထည့်ဖို့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်။
Microsoft Office အသုံးပြုခြင်း features
Microsoft က Office ကို - ဤအစီအစဉ်များ၏နံပါတ်ပါဝင်သည်ဟု full-featured အထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ OneNote - သူတွေထဲမှာစာသားအယ်ဒီတာ Word, Excel spreadsheet Processor, PowerPoint တင်ပြချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်, ဒါပေမယ့်လည်းမှတ်စုများကိုဖန်တီးရန်ကိရိယာတခုသာဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသူကြီးနှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်သို့စာသားဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်: ဤနည်းလမ်းကို Windows နဲ့ Microsoft Office ၏အဟောင်းတွေဗားရှင်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်သင့်လျော်ဘူး။ Microsoft က software ကိုအပေါငျးတို့သ features တွေနဲ့ functions မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဖို့, အချိန်မီထုံးစံ၌ update လုပ်ဖို့သေချာပါစေ။
သင်ခန်းစာ: နှုတ်ကပတ်တော်ကို update လုပ်နည်း
1. ပုံတစ်ပုံသို့ဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့စာသားတွေနဲ့စာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်လျက်, လျင်မြန်စွာ Access ကို Toolbar ကိုအတွက်ခလုတ် "File" ကိုနှိပ်ပါ။
မှတ်ချက်: ယခင်ကဒီခလုတ်ကို« MS Office »ဟုခေါ်သည်။
2. ကို Select လုပ်ပါ "ပုံနှိပ်ပါ" နှင့် "ပရင်တာ" အပိုင်း, OneNote »မှ Send "ကိုရွေးချယ်ပါ။ ကို "ပုံနှိပ်ပါ" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
3. စာသားစာရွက်စာတမ်းသီးခြားစာမျက်နှာ zametochnika OneNote အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ဦးတည်းသာ tab ကိုကလက်ဝဲနှင့်လက်ယာဘာမျှမ (-, အဖုံးကိုဖယ်ရှားမဆိုလျှင်) လည်းမရှိသောအစီအစဉ်တွင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
4. ခလုတ်ကို "File" ကိုနှိပ်ပါ "Export" ကို select လုပ်ပါ, ပြီးတော့ select လုပ်ပါ "ဟုစကားလုံးစာရွက်စာတမ်း။ " "ပို့ကုန်" ကိုနှိပ်ပါ, အဲဒီနောက်ဖိုင်ကိုသိမ်းဆည်းဖို့လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်။
5. အခုတော့နှုတ်ကပတ်တော်၌ဖိုင်ကိုပြန်ဖွင့် - သောအစားလွင်ပြင်စာသားစာမျက်နှာကစာသားတွေနဲ့ပုံတစ်ပုံဆံ့ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်စာရွက်စာတမ်းပြသပါလိမ့်မည်။
6. အားလုံးကြောင်းဖြစ်နေဆဲ - သီးခြားဖိုင်များအဖြစ်စာသားနှင့်အတူပုံရိပ်ကိုကယ်ဖို့။ ရုံရုပ်ပုံများပေါ်တဦးတည်း mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်အားဖြင့်တဦးတည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့် option ကို JPG format ကိုရွေးချယ်ဖိုင်အမည်ကိုသတ်မှတ်, လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်, "ရုပ်ပုံအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်ဆဲတဲ့စကားလုံးစာရွက်စာတမ်းကနေ image ကို retrieve နိုငျပုံကိုလေ့လာသင်ယူရန်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆောင်းပါး၌မဘတ်နိုင်။
စာသားစာရွက်စာတမ်း image ကိုအောင်အသုံးပြုပုံကြောင့်အကောင့်သို့စာသား၏အရည်အသွေးနောက်ဆုံးမှာနှုတ်ကပတ်တော်၌ကဲ့သို့မြင့်မားတဲ့မဖြစ်ဖို့သက်သေပြစေခြင်းငှါအချက်ကိုယူရန်လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါအရာအထက်ဖော်ပြထားတဲ့နည်းစနစ်များအသီးအသီး, အကြောင်းအရာအကြမ်းဂရပ်ဖစ်ဖို့အားနည်းချက်ကိုစာသားကိုပြောင်းလဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ များစွာသောအမှုများ (အများအပြားအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. ) တွင်ပြုလုပ်စာသားမှုန်ဝါးနှင့်ဖတ်ရှုဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မည်ပုံပြောင်းလဲနေသည်ဟူသောအချက်ကိုဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ကြိုတင်ပုံတစ်ပုံသို့၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းမှစာရွက်စာတမ်းအတွက် 1. စကေးစာမျက်နှာ, စာသားပုံနှိပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်စာလုံးအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်။ သင်နှုတ်ကပတ်တော်၌အချို့သောစာရင်းသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သတိပေးချက်ပါရှိသည်သောအခါဤများအတွက်အထူးသဖြင့်ကောင်းလှ၏။
2. Paint Program ကိုမှတဆင့် image file ကို Save, သင်တပြင်လုံးကိုစာမကျြနှာကိုမမွငျနိုငျသညျ။ ဤကိစ္စတွင်ထဲမှာဖိုင်ကိုပြသသောအတိုင်းအတာလျှော့ချရန်လိုအပ်ပေသည်။
ဒီဆောင်းပါးကနေအားလုံးရဲ့သင် JPG ဖိုင်သို့စကားလုံးစာရွက်စာတမ်းပြောင်းလဲနိုင်သည့်နှင့်အတူပါဆုံးရိုးရှင်းပြီးလက်လှမ်းနည်းလမ်းအကြောင်းသိလာတယ်။ စာသားအထဲသို့ image ကိုပြောင်း - - ဤဘာသာရပ်ပေါ်မှာငါတို့ပစ္စည်းကိုဖတ်ရှုဖို့သငျသညျအားပေးကိစ္စတွင်၌သင်တို့ကိုအတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ပြဿနာလုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။